Maxay ka wada hadleen gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo gudoomiyiihi hore golaha shacabka | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxay ka wada hadleen gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo gudoomiyiihi hore...
Maxay ka wada hadleen gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo gudoomiyiihi hore golaha shacabka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh ayaa magaalada Muqdisho kaga qeyb galay kulan qado sharaf ah oo uu sameeyay guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Kulanka waxaa sidoo kale ka qeyb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koofur Galbeed C/Casiis Xasan Maxamed (lafta gareen), Madaxweynihii hore ee Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Xildhibaan Aadan Madoobe iyo masuuliyiin kale.
Guddoomiye Maxamed Mursal iyo masuuliyiinta kale ayaa iska xog wareystay xaalada guud ee dalka.
Waxaana si gaar ah ay uga wada hadleen arrimaha ka taagan dalka ee ku aaddan xaaladda doorashooyinka diyaar garowga loogu jiro, waxaana kulan kani imaanayaa iyadoo dhawaan Muqdosjo lagu saxiixay heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana shirkaasi yeeshay Ra’iisul Wasaare Rooble, madaxda Maamul Goboleedyada dalka iyo Guddoomiyaha Gobolkani Banaadir, waxaana xusid mudan in heshiiskaasi ay soo dhaweyeen saamilayda siyaasadda Soomaaliya.
Maqaal horeRa”iisul wasaaraha xukumada federalka somalia ayaa amar dul dhigay golahiisa wasiirada
Maqaal XigaWasiirka arimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed aya xil ka qaadis ku sameeyey qaar kamida maamulka degmada wala ween